KagajPatra Media Network - Page4of 46 - सत्य तथ्य र निस्पक्ष पत्रकारिताको एक ज्वलन्त उदारण !
१४ नेपालीको कोरोनाभाइरसका कारण विदेशमा मृत्यु, करिब २ सय जना भन्दा बढी संक्रमित
बैशाख ०५ बनेपा । कोरोनाभाइरस बाट हालसम्म विदेशमा १४ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । करिब २ सय जना संक्रमित छन् । बेलायतमा सबैभन्दा बढी आठ नेपालीको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये सात जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने एक जनाको पुष्टि हुन बाँकी छ । ३५ जना […]
नेपालमा हालसम्म १६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण
बैशाख ०३ बनेपा । नेपालमा हालसम्म १६ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित ‘प्रेस ब्रिफिङ’मा बुधबार बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा . विकास देवकोटाले धनगढीमा पाँच, काठमाडौंमा चार, वीरगन्जमा चार तथा बागलुङमा दुईजना संक्रमितको उपचार भइरहेको बताउनुभयो । सुरुका संक्रमित एकजनालाई भने उपचारपछि यसअघि नै निको […]
कैलालीको भजनी नगरपालिकाकी १५ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार
बैशाख ०३ बनेपा । कैलालीको भजनी नगरपालिकाकी १५ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ । मंगलबार साँझ गोठालो गएका बेला उनीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा संलग्नताको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा जोशीपुर गाउँपालिका–४ लालपुरफका २९ वर्षका रामकुमार चौधरी, २२ वर्षका मंगल […]
गोरखाका एक युवकको र्‍यापिड डाइग्नेस्टिक किट (आरडीटी) परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ
बैशाख ०३ बनेपा । बहराइनबाट फर्किएका गोरखाका एक युवकको र्‍यापिड डाइग्नेस्टिक किट (आरडीटी) विधिबाट गरिएको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको छ । आरुघाट गाउँपालिका–५ का ३१ वर्षीय एक युवकमा गरिएको र्‍यापिड टेस्टमा पोजेटिभ रिपोर्ट आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, गोरखाका कोरोना फोकल पर्सन नारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो । ती युवा गत […]
मोरङमा नहरमा डुबेर ८ वर्षीय बालकको मृत्यु
बैशाख ०२ बनेपा । जिल्लाको दुहवी नगरपालिका–७ स्थित नहरमा डुबेर ८ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मोरङ रङगेली नगरपालिका २ घर भई दुहवी ७ मा रहेको एबीआई इँट्टाभट्टामा काम गर्ने सुरज ऋषिदेवको ८ वर्षीय छोरा करण ऋषिदेव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । आमासँगै नहरमा […]